Trump ma wuxuu "saliid ka xadayaa" Suuriya? - BBC News Somali
Trump ma wuxuu "saliid ka xadayaa" Suuriya?
Image caption Suuriya ayey dagaallo sokeeye ka socdeen tan iyo 2011-kii
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu filayo in Maraykanku bishiiba ka faa'iido malaayiin doolar shidaalka Suuriya inta ay ciidamada Maraykanku dalkaa joogaan.
Madaxweynaha Suuriya Bashar Al-Assad oo hadalkaa ka falceliyey ayaa Maraykanka ku eedeeyey in uu "ka xadayo shidaalka" dalkiisa, Ruushka oo ah dal weyn oo taageera Assad ayaa isna ku tilmaamay arintaas "qawlaysi dawladeed oo heer caalami ah".
Bal hadaba yaa gacanta ku haya ceelasha saliidda dalkaas oo ka faa'iida?
Maraykanku wuxu shaaciyey in uu ciidamadiisa kala baxayo woqooyiga Suuriya bishii Oktoobar, laakiin ilaa haatan waxaa jooga 500 oo askari oo ilaaliya ceelashada saliidda, oo waxay la socdaan xoogagga Kurdiyiintu hogaamiyaan oo haatan ah cidda koobaad ee ka faa'iidda wax soo saarka shidaalka.
Dhankooda ayaa xoogagga Ruushka ee gacanta siinaya Suuriya waxay isku dayayaan in ay gacanta ku dhigaan goobaha laga soo saaro saliidda oo ay danaynayaan.
Labada dal waxay kala saxiixdeen 2018-kii heshiis iskaashi tamarta ah oo Moscow xuquuq gaar ah u siinaya in ay dib u kiciso ceelashada saliidda iyo gaaska Suuriya.
Waana taa sababta Madaxweyne Trump isna ugu dhawaaqay in uu danaynayo in uu ka faa'iido ceelashaa ciidamadiisu ilaalinayaan.
Shidaalka iyo gaaska Suuriya wuxuu laf-dhabar u yahay dakhliga dawladda Suuirya in kasta oo shidaalka dalkaa ku jiraa yar yahay marka la barbar dhigo ka dalalka kale ee Bariga Dhexe.
Sannadii 2018, Suuriya waxaa shidaalka dhulkeeda ku jira lagu qiyaasay 2.5 bilyan oo foosto halka Sucuudiga uu ka yahay 297 bilyan, Iran 155 bilyan iyo Ciraaq oo 147 bilyan oo foosto ku jiraan.
Ciidamada dowladda Suuriya oo dib u qabsaday saldhig milateri
Trump duulaan ma ku qaadi karaa Iran?
Daacish waxaa ceelasha saliidda ka qabsaday xoogagga Kurdiyiintu hogaameyaan ee Maraykanku taageero ee magacooda la yidhaa Xoogagga Dimuqraadiga Suuriya markii ay kooxdaa jihaad alooska ah ku jabiyeen halku ugu dambaysay ee ay gacanta kaga hayeen bariga dalkaas.
Ceelasha saliidda Suuriya waxa khasaare weyn gaadhsiiyey duqaymaha cirka ee Maraykanku ku doonayey in uu ku curyaamiyo isha dakhliga kooxda.
Image caption Kurdiyiinta ayaa dakhli badan ka hela saliidda
Xoogagga Dimuqraadiga Suuriya waxay gulufka ay ku qabsanayaan ceelasha waayeyn ee saliidda ee ku yaal woqooyi bari Suuriya ee ku teedsan weiba Furaat ku qaadeen ciidamada kooxda la baxday Dawladda Islaamka sannadkii 2017-kii.
Waxaana u suurtogashay in ay dib u hagaajiyaan agabkii wax soo saarka.
Jonathan Hoffman oo ah wasiir ku xigeenka gaashaan dhigga Maraykanka ayaa dhawaan yidhi "Dakhliga ka soo xarooda saliiddu gacanta u geli maayo Maraykanka ee waxaa qaadanay Xoogagga Dimuqraadiga Suuriya".
Charles Lister oo ah cilmi baadhe sare oo ka tirsan mac-hadka Midle East Inistitue ayaa yidhi: "Xoogagga Dimuqraadiga Suuriya iyo qabaa'ilka ay gacan saarka leeyihiin ee bariga Suuriya ayaa haatan gacanta ku haya qiyaastii 70% ceelasha saliidda dalkaas iyo kuwo kale oo muhiima oo gaaska ah"
"In kasta oo ceelashaa badankooda wax soo saarkoodu aad uga hooseeyo sidii uu dagaalka ka hor ahaan jiray" ayuu yidhi "hadana waa dakhli weyn oo soo gala Xoogagga Dimuqraadiga Suuriya".
Xukuumadda Madaxweyne Assad qudheedu aad bay ugu baahi qabtaa in ay ceelasha saliidda hesho maadaama oo la'aantood ay ku khasbanaan doonto in ay shidaal badan la soo degto.
Hase yeeshee, maadaama oo cunoqabataynta Maraykanka iyo Midowga Yurub ay durba wiiqday, Dimishiq way ku adagtahay arintaasi.